सुनिलले कृष्णाको शो नगर्ने, अलीलाई ल्याइयो
काठमाडौं, ५ असार — सुनिल ग्रोवरले कपिल शर्माका प्रतिस्पर्धी कृष्णा अभिषेकको शो गर्ने कुरा चलेको सार्वजनिक भएको थियो ।
तर अहिले सुनिलको यो शोमा रुचि नभएको र यसको हिस्सा नबन्ने कुरा आएको छ । उनको साटो अली असगरलाई शोमा ल्याइएको छ ।
कृष्णा अभिषेकले आफ्ना पुराना साथी सुदेश लहरीका साथ कमेडी कम्पनी नामक शो गर्ने पनि खबर आएका छन् । यो शो सोनीबाट प्रसारित हुनेछ ।
रिपोर्टमा एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘शोको नाम कमेडी कम्पनी राखिनेछ र यसमा नाटक खेल्न चाहने परिवारलाई देखाइनेछ । कपिलले जस्तै कृष्णाले पनि सेलेब्रिटीहरूलाई शोमा निमन्त्रणा गरेर उनीहरूसँग कुराकानी गर्नेछन् ।’
त्यसोभए कपिलको शो बन्द हुन्छ त ? यो त समयले नै बताउला ।
अनि सुनिलको बहुप्रतीक्षित शो सुपर नाइट विथ ट्युबलाइट पनि शनिवार राति प्रसारण भयो । तर सुनिलले दर्शकलाई प्रभावित गर्न सके त ?
फ्यानहरूले शोप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । सुनिल ग्रोवर डा मशहूर गुलाटी अनि अली असगर नर्सको भूमिकामा देखिएका थिए ।
तर सुनिल र अलीले खासै हँसाउन नसकेको बरू संकेत भोसलेले सञ्जय दत्तको मिमिक्री गरेर हँसाएको प्रतिक्रिया आएका छन् ।